I-AirTies Air 4920 ye-Smart Mesh Incwadana yokuSebenzisa-iiNcwadana +
Ikhaya » Ezomoya » I-AirTies Air 4920 ye-Smart Mesh yoMsebenzisi
I-AirTies Air 4920 ye-Smart Mesh yoMsebenzisi
Aprili 26, 2018 Aprili 27, 2018 10 Comments kwi-AirTies Air 4920 ye-Smart Mesh Manual
1 I-AirTies Air 4920 ye-Smart Mesh yoMsebenzisi
1.1 Isikhokelo sokuFakela ngokukhawuleza
1.1.1 Iincwadana/Izixhobo eziyeleleneyo
Isikhokelo sokuFakela ngokukhawuleza
I-1600 Mbps ye-Smart Mesh yokuFikelela kwiNdawo yoMoya 4920
UKUSETYENZISWA KULULA: INDLELA YOKUFIKELELA
1. Beka iAir 4920 ecaleni kwendlela yakho uze uqhagamshele ezi zimbini usebenzisa i-Ethernet ebiyelweyo
intambo (iplagi etyheli).
2. Qhagamshela isixhobo somoya esingama-4920 kwimayins uze ucofe iswitshi samandla.
3. Linda kude kube zombini ii-5 GHz kunye ne-2.4 GHz ii-LEDs ziluhlaza oluqinileyo Oku kungathatha ukuya kwimizuzu emi-3.
4. Ngoku, ungaqhagamshela izixhobo eziphathwayo kwinethiwekhi yakho entsha engenazingcingo.Ifactory igama lomnatha elingagqibekanga kunye negama lokugqitha libhalwe emazantsi esixhobo.
Kwiklayenti nganye (umzekelo, ilaptop, ifowuni okanye ithebhulethi),
qhagamshela kwinethiwekhi kwileyibhile.
Ngenisa igama eligqithisiweyo lwenethiwekhi xa ushukunyiswa.
5. (Ngokuzithandela) Ungalitshintsha igama lenethiwekhi (i-SSID) kunye negama eligqithisiweyo lenethiwekhi yakho.
Qhagamshela kwinethiwekhi yakho, vula web isikhangeli kunye nohlobo "http: //air4920.local" kwifayile
ibha yedilesi. Ngena kwaye ungene ku-SETUP NGOKUPHELELEYO ukusuka kwisahlulo sasekhohlo. (Igama lokugqitha lokungena lingenanto.)
YANDISA ISIQINISEKISO SAKHO SE-WiFi (MESH):
Ukulungiselela: Ukuqhagamshela i-Air 4920 entsha
1. Egumbini apho ikhoyo i-router, beka i-Air 4920 entsha kumgama ojikeleze ezintathu
Iimitha ukusuka kwisixhobo esele sikhona soMoya 4920, sinxibelelane nomnxeba kunye silinde de ii-5 GHz kunye ne-2.4 GHz ii-LED zikhanyise ngokuluhlaza (imizuzwana emi-4 ON, imizuzwana emi-4 icinyiwe). Oku kungathatha ukuya kwimizuzu emi-3.
2.a cofa iqhosha leWPS kwi-Air 4920 ekhoyo (ecaleni kwendlela) imizuzwana emi-2 kunye
emva koko kwi-Air 4920 entsha imizuzwana emi-2 (2.b).
Ii-5 GHz kunye nee-2.4 GHz ze-LED qala ukukhanyisa kwaye izixhobo zidibanisa ngokuzenzekelayo. Le nkqubo ingathatha ukuya kuthi ga kwimizuzu emihlanu. Unxibelelwano lusekiwe nje ukuba Ii-LED zikhanyise ngokuluhlaza (I-5 GHz ye-LED iya KUCIMA ngokufutshane kube kanye kwimizuzwana emi-5).
Halala, uyiqwalasele ngempumelelo ifowuni yakho entsha. Iziqinisekiso zakho zenethiwekhi ezikhoyo ze-Air 4920 zilungiselelwe ngokuzenzekelayo kwi-Air 4920 yakho entsha.
Phawula: Ukuba i-5GHz ye-LED kwisixhobo esitsha ayikhanyisi luhlaza kwisithuba semizuzu emihlanu,
nceda uphinde inyathelo 2.
Ukuseta i-Air 4920 kwigumbi olithandayo
3. I-Air 4920 entsha ngoku inokucinywa ize ibekwe kwigumbi olithandayo.
Unxibelelwano luya kusekwa ngokuzenzekelayo. Le nkqubo iya kuthatha imizuzu emithathu.
Qaphela: Ukuba i-5 GHz LED ayikhanyisi luhlaza (I-5 GHz ye-LED iya KUCIMA ngokufutshane kube kanye kuyo yonke into
Imizuzwana emi-5) kwimizuzu emithathu, nceda ujonge isahluko «Ukusombulula ingxaki» (iphepha 5).
4. (Ngokukhetha) Ngoku, ungaqhagamshela izixhobo ezinentambo (kule example, i-Set-Top Box) kwi-Air 4920 isebenzisa intambo ye-ethernet (iplagi etyheli).
5. (Ngokuzithandela) Unokongeza ii-Air 4920s ezongezelelweyo kwinethiwekhi yakho ngokuphinda amanyathelo ukusuka ku-1.
Ukuphucula ukugubungela ngaphandle kwamacingo
Ukuba ungathanda ukuphucula ukufakwa ngaphandle kwamacingo kwelinye igumbi, ungaseta i-Air 4920 eyongezelelweyo. Unokudibanisa izixhobo nge-Ethernet kule Air 4920 (exampi-STB, ikhompyuter okanye ikhonsoli yomdlalo).
Ukuba indawo ofuna ukuyigubungela ikude kakhulu kwi-Air 4920 yakho ekhoyo, ungafaka ii-Air 4920s ezongezelelweyo ukufikelela apho.
IINKCUKACHA ZOKUSEBENZA KWEENKQUBO:
-Cima inkonzo engenazingcingo kwimodem yakho.
-Gcina iiyunithi kude ne:
Imithombo enokubakho yokuphazamiseka kombane. Izixhobo ezinokubangela ukuphazamiseka zibandakanya abalandeli beesilingi, iinkqubo zokhuseleko lwasekhaya, ii-microwaves, ii-PC kunye neefowuni ezingenantambo (i-handset kunye nesiseko).
- Umphezulu omkhulu wesinyithi kunye nezinto. Izinto ezinkulu kunye neendawo ezibanzi ezifana neglasi, iindonga ezifakwe i-insulated, iitanki zentlanzi, izibuko, izitena kunye neendonga zekhonkrithi nazo zinokunciphisa imiqondiso engenazintambo.
Imithombo kunye neendawo zobushushu ezifana nee-oveni kunye namagumbi elanga kunye nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo nokuba kukho umoya opholileyo.
-Kwacetyiswa kakhulu ukuba umbane ongenakuphazanyiswa (UPSes) (okanye, ubuncinci, ukhuselo olukhuselayo) usetyenziselwa ukukhusela ii-Air 4920s kunye nezinye izixhobo zombane (iimodem ze-VDSL, ii-routers / amasango, iibhokisi ezisetiweyo, iiTV, njl. ) kwiingozi zombane. Izaqhwithi zombane, ivoltagUkunyuka kunye nobunye ubungozi obunxulumene nombane wombane kunokubangela umonakalo omkhulu kwizixhobo zombane. Ukongeza, nokuba kukuphazamiseka kwimizuzwana eyi-1 kumandla ombane kunokwenzeka ukuba kubangele zonke iimodem, abathengi abangenazingcingo, iiTV, iibhokisi ezisetwa phezulu, njl.njl. Nokuba izixhobo ziqala ngokuzenzekelayo, iya kuba yimizuzu eliqela ngaphambi kokuba zonke iinkqubo zibuyele kwi-intanethi kwaye zikuvumele ukonwabele iinkonzo zakho ezisekwe kwi-Intanethi.
Ukubuyela kuseto lwefektri:
Ukubuyisela iyunithi kuseto lwefektri, cofa phantsi kwiqhosha lokuseta kwakhona (kwindawo encinci evulekileyo ngasemva) kangangemizuzwana eli-10. Ipaperclip yesinyithi (eneengcebiso ezandisiweyo) okanye i-toothpick eyomeleleyo zihlala zilungile kulo msebenzi. Xa inkqubo yokusetha kwakhona ichukunyisiwe, ii-LED ezingaphambili ziya "kucima" okwexeshana kwaye iyunithi iya kuqalisa (malunga nemizuzu emi-3) kuseto lwefektri.
-Ukuba wenza ngokwezifiso useto lwenethiwekhi, nceda uzirekhode apha:
Isinxibelelanisi Somsebenzisi Iphasiwedi: ……………………………………………… ..
Le mveliso isebenzisa isoftware ephuculweyo luluntu oluvulelekileyo. Nasiphi na isoftware enjalo inephepha-mvume phantsi kwemiqathango yelayisensi ethile esetyenziswa kuloo software (njengeGPL, LGPL njlnjl.). Iinkcukacha ezithe kratya malunga neelayisensi ezifanelekileyo kunye nemigaqo yelayisensi inokufumaneka kwisixhobo esibonakalayo somsebenzisi. Ngokusebenzisa le mveliso, uyavuma ukuba uphindeviewyahlela loo migaqo yelayisensi kwaye uyavuma ukuba ubotshelelwe yiyo. Apho loo magunya akuvumela ukuba ungene kwikhowudi yemithombo yesoftware ekhankanyiweyo, loo khowudi yemithombo iya kufumaneka ngexabiso xa uceliwe kwii-AirTies. Ukufumana ikopi yale khowudi yomthombo, nceda uthumele isicelo sakho ngokubhaliweyo nge-imeyile ku [imeyile ikhuselwe] okanye nge-imeyile yenkumba ukuya: kwi-AirTies Unxibelelwano olungenazingcingo uGulbahar Mah. UAvni Dilligil Sok. Hayi: 5 uCelik yiMerkezi, iMecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / iTirkey AirTies iya kuthumela i-CD kuwe nekhowudi yemithombo eceliweyo ye- $ 9,99 kunye neendleko zokuhambisa. Ngeenkcukacha nceda unxibelelane [imeyile ikhuselwe]
Incwadana yomsebenzisi wenethiwekhi yeBluetooth Mesh
I-Bluetooth Mesh Networking User Manual-I-PDF esetyenzisiweyo ye-Bluetooth Mesh Networking yomsebenzisi- iPDF yoqobo
INCWADANA YOMSEBENZI WOMSEBENZI WOMGAQO-NKQUBO
Incwadana yomsebenzisi yomsebenzisi weGelius AIR TWS
I-Gelius AIR TWS Iseti yentloko ye-Gelius Incwadi Yomsebenzisi ye-Gelius AIR TWS Incwadi Yomsebenzisi yeseti yentloko-Elungiselelwe iPDF Gelius AIR TWS...
Incwadana yoMsebenzisi yoMsebenzi woBume boMoya
Inkqubo ye-Hisense yoMoya woLawulo loMsebenzisi-nkonzo-yokuphatha-i-hisense-entsha-yokuthuthuzela-i-wandmodel-ilungiselelwe
Aprili 26, 2018 Aprili 27, 2018 exhonyiweyoEzomoyaTags: Air 4920, Ezomoya, incwadi yomsebenzisi
I-air4920.local [Indlela yokungena]
Novemba 16, 2018 kwi-12: 51
Andikwazi ukufumana igama eligqithisiweyo lokungena kwi-extender, njengoko kukhankanyiwe kwincwadana igama eligqithisiweyo yingubo, ndizamile oku kwaye andifumananga, kwaye ndikhangela igama eligqithisiweyo elingafaniyo kwaye andilifumani Iphakheji ye- okanye kwi-extender uqobo.
Epreli 15, 2020 kwi-6: 54 pm
iqhosha lam lokuphumla liphuliwe ukuze ndiphumle njani ngaphandle kweqhosha? ……
kwaye akukho mntu uza kuyilungisa ekhaya…
Meyi 20, 2021 kwi-3: 18
Unokuseta kwakhona ngokugcina iqhosha le-WPS kwimizuzwana eyi-10
Juni 25, 2020 kwi-7: 54
andisayi kuphinda ndizithenge ezi! zilungile xa zisebenza ngokuchanekileyo, kodwa xa kungekho mntu uzakufowunela uncedo ndizamile ukufowunela onke amanani endingawafumanayo
Oktobha 16, 2020 kwi-6: 29 pm
Ngaba i-AirTies 4920 extender ingasebenza kwinethiwekhi enemingxunya kunye ne-AirTies 4921 extender?
Novemba 22, 2020 kwi-4: 16
Ndineeyunithi ezimbini zomoya. Izinyuko ezinyukayo kunye neyunithi ephambili edityaniswe kwizinyuko ezantsi. Ndinelinye phezulu ngakwicube yam yomlilo kodwa ityhubhu iya kudibanisa kuphela kwizinyuko ezantsi. Kubonakala ngathi izinto ezininzi ngendawo inxibelelana nezinyuko ezantsi endaweni yezinyuko ezinyukayo. Ngaba ikhona indlela yokunyanzela ezi zinto ukunxibelelana neyunithi yokuvala?
UAndy Mulchek uthi:
Disemba 1, 2020 kwi-4: 02 pm
Andixhasi, kodwa ukuqonda kwam kukuba iyunithi edityaniswe kwimodem iseka uthungelwano, kwaye iya kusetyenziswa kuyo yonke indlu. Iiyunithi ezongezelelweyo ziya kukhulisa umqondiso, kwaye yandise uthungelwano olusekwe kwiyunithi yokuqala. Ke, uqhagamshela kwinethiwekhi esekwe kwiyunithi yokuqala, kwaye iyunithi eyongezelelweyo inyusa umqondiso kuwe.
Agasti 24, 2021 kwi 8: 05 pm
Yintoni ipini ye-WPS yee-AirTies Air 4920
NgoSeptemba 11, 2021 kwi-5: 34 pm
Andinguye umlawuli wale bhodi. Yile nto ndiyifundileyo namhlanje. Kwiminyaka emibini bendisebenzisa ngempumelelo iiyunithi ezimbini ze-AirTies 4920, endiyithengileyo njengepakethe ezimbini (ke bobabini babenegama elifanayo le-wifi kunye negama lokugqitha). Ukufakwa koqobo kwakulula.
Namhlanje ndongeze iyunithi yesithathu engama-4920. Ngaphambi kokuba ndiqale, iiyunithi ezimbini zokuqala zazisebenza (iqhosha le-5 GHz licofa yonke imizuzwana emi-5). Kwilaptop yam, ndibone imeko enye yeli gama lisetwa ngumzi mveliso we-wifi, kwaye ndinokunxibelelana nayo ngaphandle kwam ndisebenzisa igama eligqithisiweyo elisetiweyo. Ndinganxibelelana nayo nayiphi na iyunithi ndisebenzisa intambo ye-ethernet.
Okwangoku ikhompyuter yam inokubona iyunithi yesithathu efumanekayo kuluhlu lwenethiwekhi ye-wifi, kodwa andinakukwazi ukunxibelelana nayo ndisebenzisa igama layo kunye negama lokugqitha le-wifi. I-BTW, ngaxa lithile, ndacwangcisa zonke iiyunithi ezintathu kuseto lwefektri yazo ndisebenzisa iklip yephepha kumngxunya wokusetha kwakhona umngxunya kufutshane nentambo yombane, kodwa oko bekuyimfuneko kuphela kwiyunithi yesithathu endiyithengileyo "ndiyisebenzise ngobunono".
Iyunithi engama-4920 edityaniswe ngentambo ye-ethernet kwi-router, yiyo inkosi. Ukongeza iyunithi yesithathu, ndiyinike amandla malunga neenyawo ezintlanu ukusuka kwiyunithi yenkosi. Akukho ntambo ye-ethernet iqhotyoshelwe kwiyunithi yesithathu. Ndacinezela imizuzwana emi-5 iqhosha le-WPS kwiyunithi eyintloko. Ndaye ndacinezela kwiyunithi yesithathu iqhosha le-WPS kwimizuzwana emi-2. Ndilinde imizuzu eyi-2-3, kwaye zombini iiyunithi 'ze-5 GHz iqhosha laqala ukucofa yonke imizuzwana emi-5 (iyunithi yesithathu yathatha ixesha elide). Ngelo xesha, ngoku kukho iiyunithi ezintathu ezinikwe amandla, ikhompyuter yam yabona kuphela igama le-wifi yeyunithi eyintloko (enye edityaniswe ngocingo kwi-router).
Sebenzisa umphathi wendlela yam web iphepha, ndabona ukuba umzila wayezibona zontathu iiyunithi (nganye inedilesi ye-IP eyahlukileyo). Sebenzisa idilesi ye-MAC eboniswe kwiphepha lomlawuli we-router nasezantsi kweyunithi eyintloko, ndichonge idilesi ye-IP yeyunithi eyintloko. Ke kwilaptop yam, ndingenise idilesi ye-IP kwithebhu entsha yesikhangeli, kwaye oko kwandivumela ukuba nditshintshe igama le-wifi kunye negama lokugqitha. Ugqibile (sukuzama ukutshintsha igama le-wifi kunye negama lokugqitha kwezinye iiyunithi ezimbini).
Ngoku, ngazo zontathu izinto ndiyasebenza, ndiyakwazi ukuhambahamba nezixhobo zam eziphathwayo kwaye ziyaqhagamshela ngokuzenzekelayo kwiyunithi enowona mqondiso womeleleyo. Ipholile kakhulu kwaye iluncedo. Akwaba bendikwenzile oku kwiminyaka emibini edlulileyo.
Ndigcine i-wifi yomzila ivuliwe. Mna andiboni kungenelela kuyo, ke ndiyigcina njengomqolo, kwimeko apho kufuneka ndibuyele kwi-wifi ye-router. I-BTW, kwimeko yam, isiginali ye-wifi kuzo zontathu iiyunithi yomelele ngakumbi kune-router, kwaye isantya esingenazingcingo siphindwe kabini ngokukhawuleza, phezulu naphezulu.
January 14, 2022 kwi 2: 28 am
Ngaba kuyenzeka ukusebenzisa olu luhlu lwandisayo nge-router yomntu wesithathu? Ndifuna ukwazi ukuba yintoni ikhowudi ye-WPS ye-pin kukho nabani na owaziyo?
Gcina igama lam, imeyile, kunye webindawo kwesi sikhangeli kwixesha elizayo xa ndiza kuphawula.
AJAX 8706 Keypad Wireless Touch Keyboard Incwadi yomsebenzisi
Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Snowman kunye Snowflakes Snowflakes Incwadi yomyalelo
AJAX 17938 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX Power Supply Unit Manual
I-AJAX 10306 I-Transmitter eneNcingo kwi-Wireless Detector Converter Manual
UMARKO L PETERKA on ZERFUN G8 Pro Wireless Microphone System Incwadi yoMsebenzisi
Kurt on Incwadana yomlilo ye-Airrex ye-Infrared AH-200/300/800 Incwadi yomsebenzisi
2017 Toyota Camry Hybrid LE Fuse Box Diagrams on Umzobo weToyota Camry uMkhweli weFuse yeBhokisi
2017 Mitsubishi Lancer 4WD Fuse Box Diagrams on UMkhweli weMitsubishi Lancer kunye neNzobo yeBhokisi yeFuse yeBhokisi
K Townsend on Mira Ukunyaniseka ERD Bar Valve kunye neZilinganisi Manual yoMsebenzisi